Elden Mhete Ongororo: Zvirinani Mweya Yakasviba Pasina Zvigadzirwa - Gamepoint - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | February 26, 2022 | nhau, Miedzo yemitambo, pamusoro, Vhidhiyo mitambo
Chikamu 90%Chikamu 90%
Elden Ring ari pano - uye akanaka, kwete: anotyisa. Muyedzo, iyo yakavhurika-yepasirese chiitiko-yekutamba mutambo unoratidza kuve mutambo wakarohwa waitarisira vateveri. Mamiriro ekunze ari kupinda, nyaya uye mharidzo inobata, mutambo wekutamba pane poindi - muchidimbu: Heino kurova.
Mubvunzo uyo Elden Ring ikozvino yave pamusoro pe: Ndeipi nguva yekupedzisira pave nemutambo wevhidhiyo waigona kurarama maererano nezvose zvakambotarisirwa? Ndizvozvo. Pave zvakare nemazita mumakore achangopfuura anga ari pedyo. Zelda - Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5 - asi neimwe nzira mitambo yese yaive nekushaya simba kuri pachena. Ndizvo chaizvo izvo Kubva kuSoftware hazviiti. NaElden Ring, vagadziri vaita chirevo.
Elden Ring is Dark Souls muhombe
Mutambo wekuita-yekutamba nenyika yakavhurika unowana zviyero zvepamusoro - pasi rese. Yakatoonekwa seyakanakisa vhidhiyo mutambo wegore, uye zvine nharo imwe yeakanakisa vhidhiyo mitambo yemakore gumi apfuura. Kwete nekuti Elden Ring inopa yakanakisa magiraidhi, yakanakisa mutambo wemitambo, yakanakisa nyaya uye yakanakisa usability, asi nekuti mutambo sepakeji wakanakisa zvekuti izvo zvinoregererwa zvinokanganisika hazvigone kuvhara mufananidzo wakazara.
Ini ndinoda maitiro - iyo sumo inotogadzira mamiriro. Kunobva: gamepoint
Kubva paSoftware vakatoratidza zvavanogona neiyo Dark Souls series. Tarisiro dzevateveri dzaive dzakakwirirawo. Izvozvi zvave pachena: vagadziri vaendesa, uye sei. Elden Ring inyanzvi chidimbu chenhoroondo yemutambo wevhidhiyo. Maminitsi mashoma ekutanga akaoma, nekuti murondedzeri anonamata pasi penyaya zvishoma nezvishoma, anobva angonzwa izwi oridza dhirama. Iwe wasvika, kubva zvino zvichienda mberi zvese nezve Elden Ring.
Mutambo uyu unopenya nemamiriro ekunze anobata, unovaraidza kwemaawa akawanda uye unoburitsa hudzamu hwemutambo uhwo munhu aitarisira kana akanzwa kuti George RR Martin - Mister Game of Thrones pachake - ndiye aizove nemhosva yenyaya yemutambo wekutamba-mutambo. Uye: Elden Ring inogonesa nemhando uye yakanakisa mutambo wekutamba, kunyangwe mutambo wacho uchishungurudza chaizvo munzvimbo. Kubva paSoftware vatoshandura screws uye vakaita iyo yeRima Souls-seye-yekutamba mutambo zvishoma isina kudzika ine yakavhurika mutambo wenyika.
Iwe unogona kusarudza kubva kumakirasi gumi - kubva kune vanopemha kusvika ku samurai. Kunobva: gamepoint
Ndizvo chaizvo izvi ndicho chinhu chiripo zvakanyanya: pane chimwe chinhu chekuongorora munenge makona ese. NeElden Ring, hazvisi izvo chete zvine musoro, zvinotofanira kutenderera nenyika kuburitsa zvakavanzika zvayo. Pamwe kukanganisa kukuru kwechiito-yekutamba mutambo ndeyekuti iwe unofanirwa kuve unokwanisa kubatanidzwa. Nepo Elden Ring isiri kunetsa seMweya Yakasviba, ichiri kusaregerera. Mweya Yakasviba haipe vatambi chipo, Elden Ring anoita zvibvumirano zvidiki-asi haisi iyo yemunhu wese kapu yetii. Saka iwe unofanirwa kuda kupemberera nguva dzekushungurudzika, kufara parufu rwescreen nekuti unokurudzirwa kuita zvirinani pane inotevera kuyedza - kana gumi inotevera kuyedza. Zvakafanana nokuzvipa mubayiro nokuda kwokutsungirira kwako.
Pasina kupokana, Kubva kuSoftware yakaunza hunyanzvi hwayo kusvika parizvino neElden Ring. Zviitiko zviri mukati menyika zvinokwezva. Hondo dzakaparadza nyika, mamwe madenda akaparadza. Munyori George RR Martin haanetse nemazano ake, ayo anokanganisa humambo. Apo madzishe asingakwanisi kuzviita, mutambi se "akasvibiswa" anofanira kugadzirisa. Iwe unosarudza gamba rako kubva kumakirasi gumi, izvo zvisiri izvo. Iwe unotarisisa maitiro ekutamba kuburikidza nesarudzo yekirasi, furatira nzira yako kuburikidza nekugadzira hunhu uchishandisa masiraidhi, sarudzo dzekuseta zvakanaka, asi kwete zvekushamisira, zvobva zvatanga. Iwe haufanirwe kumirira kwenguva yakareba kurwa kwekutanga boss, zvakawanda zvinogona kuburitswa. Izvi zvinogona kunge zvisina kujairika, asi zvinosungira vatambi kuElden Ring kutanga.
Sei? Nekuti kurwa kunopesana neObermotze kunoda huwandu hwakazara hwekuita kwemutambo, nemamwe mazwi: unogona kupenya semutambi - kana kwete, asi zvino hazvienderere mberi. Kuedza mushure mekuedza mumwe anonyengedza muvengi kuti auraye, kana mumwe akafa ega, anorasikirwa neanomhanya. Unogona kuzviwana zvakare - kana ukakundikana, chikamu chekufambira mberi kwemutambo chakarasika. Zvisinganzwisisike, zvakadaro, munhu haatsamwe, asi anonzwisisa kufa kwese kwese sekudanwa kwekufadza kuti iwedzere kusakanganisa mukurwa. Nenzira, kune zviri pachena kukwereta kubva kuRima Souls akateedzana, mamwe emamonsters anototyisa akafanana. Chinhu chimwe hachisati chachinja: kutanga hachisi chidzidzo chakapfava, chakareba - kubva pakutanga unobva wakanganiswa kana ukasangwarira. Nekudaro, nekuti uri kufamba munyika yakavhurika, unogona kungodzivirira dzimwe kusangana. Nenzira iyi, Kubva paSoftware inoderedza nhanho yekuomerwa pasina kubvisa zvakananga kuoma - kungwara.
Kufa kwemapere kwakafanana nekufa nemakonzo, asi hapana nyadzi muElden Ring. Kunobva: gamepoint
Kurwa kwakaoma, asi kunogona kugona: nemoyo murefu uye kutsungirira. Kukunda haisi tsaona, kwete nekuti mutambo wemutambo uri padanho zvekuti iwe unogara uri mukutonga kuzere - uchidzivirira apo neapo tekinoroji chipingamupinyi. Kungori pazviri, izvo hazvishande neElden Ring chero sezvazvaimboita nemazita eMweya Yerima pamberi payo. Zvakakosha kudzidza mupikisi kutanga, kuziva kurwiswa kwake, kuitira kuti wobva waita kwavari nekufamba kunonzvenga kana kurwisa kwakaringana nguva. Panzvimbo yekupopota kweupenzi, ndezvemaitiro ekurwa chaiwo. Kurwa nevatungamiriri dzimwe nguva kunonetsa, kunogara uye nekugara kwenguva refu, ndipo paunowedzera kukanganisa. Dai usina kungwarira kamwe chete, gamba raibvarurwa. Izvi zvinogona kushungurudza, asi kazhinji pane kwete, zvinoshanduka kuve zvinonakidza zvikuru. Mukupedzisira, dambudziko risingaperi rinoita kuti Elden Ring ive yakasiyana zvakanyanya pane zvakaitika kune mamwe maitiro ekuita-yekutamba mitambo inopa. Vagadziri vanogara vachishandisa masimba eiyo yakanakisa Mweya yeRima template.
Sepedyo seElden Ring nguva nenguva inouya kuMweya Yakasviba, mabasa acho akasiyana zvakanyanya maererano nenyika: Elden Ring yakakura kakawanda. Kubva paSoftware inoshandisawo nzvimbo yakawana, kuhwanda mapako, zvakavanzika uye marudzi ese ezvinhu zvakasarudzika, uye inopa mutambi mukana wekuti aone kumhanya kwake. Kana iwe usinganzwe kusvika kune dambudziko, iwe unotsvaga-tarisa uye uwane ruzivo. Izvo hazviite kuti kurwa kuve nyore mukupedzisira, asi zvirinani unotarisana nevavengi nekunzwa kwesimba - kudzamara chokwadi chabata uye iwe wodya tsvina zvakare. Equipment inobatsira, kune mashiripiti akakwana ekuunganidza.
Kuseri kwe "Torrent", bhiza, unogona kufamba nenyika nenzira inotonhorera, nekubata kamwe chete: mutambo hautenderi mutambi kunakidzwa nerusununguko rwunofungidzirwa kwese kwese. Moto museve wemoto kana kumwe kurwiswa kunorema kunoda nzira isingaonekwe pachinzvimbo chekukwira chinogumbura - izvo zvakare zvinogoneka muElden Ring: iyo "stealth mode" inobvumira magamba kuverevedza kana kuverevedza asingaonekwe. Kushandiswa kwenzizi munyika yakashama hakusi kudikanwa nguva dzose, kunyangwe nedzidziso unogona kudaidza bhiza rako chero nguva. Zvinokanganisa dzimwe nguva, asi zvinoenderana nemutambo. Elden Ring haipe, zvinotora.
Mukufamba kwemutambo uchasangana nematunhu akawanda akanaka. Kunobva: gamepoint
Nenzira: nzvimbo dzinotaridzika zvakasiyana, dzinobata ziso nesango rematsutso, mafuro akasvibira kana nyika isina chinhu. Mukuwedzera, kune ruzha rukuru uye nyaya yakanaka kwazvo. Iyo yekupedzisira inonakidza, ine kukosha kwayo yakawedzerwa uye haisi kungoita gimmick yekushambadzira inoshandiswa naBandai Namco uye Kubva kuSoftwaren pasi pezita raGeorge RR Martin.
Iwe uchave uchivaraidzwa kwemakumi emaawa padanho repamusoro. Pano zvakare mubvunzo wepakati: Ndeupi mutambo wawakapedza?
Nhamba yevatambi: single player (optional multiplayer)
Zera: kubva pamakore masere
Subgenre: Open World Game
Mugadziri: Kubva kuSoftware
Muparidzi: Bandai Namco Varaidzo
Mutengo: kubva ku64.99 euros
Ehe, Elden Ring ndiyo nyanzvi yaitarisirwa, pamwe yakatotarisirwa. Mushure meiyo Dark Souls series nemitambo yakaita seBloodborne kana Sekiro: Shadows Die Twice, Kubva paSoftware yakakwanisa kuwedzera zvakare. Kuswededzwa kwevakatangira isimba rakakura reElden Ring, asi panguva imwechete kushaya simba kwayo kukuru: kunyangwe nyika yakavhurika yemutambo ine kubata kukuru, Elden Ring inoramba iri pamusimboti wayo chete yakashandurwa yeRima Mweya. Mune mamwe mazwi: Kubva paSoftware inopa yakawanda, asi kwete hazvo yakawanda iyo itsva. Chinhu chimwe chinotevera kubva pane izvi pamusoro pezvose: iyo mutambo musimboti hauna kumbochinja zvakanyanya. Elden Ring saka yakarongedzerwa kuboka rinotarirwa - iro, zvisinei, rinowanawo tariro-yekutamba yakazarurwa mumusoro.
Zvisinei, izvi hazvikanganisi kunakidzwa kwemutambo. Iyo yakavhurika-yepasirese chiitiko-yekutamba mutambo nemakirasi ayo gumi anosarudzika, nyaya yakanamirwa kune iyo adventures kusvika kune yekupedzisira ruzivo uye yakasimba mharidzo ine musanganiswa wemhepo yakakora uye ruzha rwakakura ine yakazara graphically yakanaka chimiro ipasuru yakazara iyo. unogona kutamba pakarenda isingade kupotsa kuburitswa kwegore rino. Elden Ring mutambo wekuona - avo vanotarisira kukurumidza-paced gameplay uye kurwa kwakajairika vanogona kuodzwa mwoyo. Kubva paSoftware inokurudzira vatambi kuti vapinde mukurwadzisa: iyo yekushaya rubatsiro, nekuti pane dzimwe nguva unofanirwa kutsvaga kuburikidza nenyika huru chete; iyo yeasingaverengeki kufa kwekrikirini nekuti iwe wakarerutsa vanopikisa kana kuti hauna kuvaongorora zvine hungwaru zvakakwana; uye iyo yechinhambwe chekuvandudza, nekuti Elden Ring anoita zvimwe zvinhu zvakasiyana, asi zvinopa zvakawanda zvezvinomiririrwa neSoftware. Ichi chikomborero uye chituko, nekuti studio yekuvandudza inoita kunge iri kudzvanya pane zvakapfuura zvigadzirwa, panguva imwe chete danho rakajeka rekusimudzira rinozivikanwa, iro rinomutsa zvakare mubvunzo wepakati: Chii chichaita Kubva kuSoftware chinotevera?
Kune rimwe divi, izvo zvisingaenderane nemutambo zvakanyanya ndeavo dzimwe nguva vakapusa AI vanopikisa: Kunyangwe iwe uchiita zvakajeka padyo navo, ivo havapindire uye vanotevera nzira dzavo dzakafanotemerwa. Iwe unopwanya mabhokisi uye mabhokisi kure nemamita mashanu, asi iyo isina kufa inoramba iri munzvimbo yayo yepixel? Mega-chaiyo maitiro haangove chinhu chinodiwa kune yekare-yakafemerwa fungidziro nyika, zvimwe zvisinganzwisisike zvinongogamuchirwa zviri nyore - asi hazvifanirwe kuve vavengi vakapusa kudaro. Mushure mezvose: asingaverengeki epakati uye makuru mabhosi ndiwo akanyatsopesana. Kukanganisa kwese pano kunotungamira kurufu pachiratidziri, saka kuzadza simba rehupenyu hakubatsiri zvakanyanya. Kana iwe ukasateerera, unofa: uyu mutemo wakapfava unoratidza Kubva kuSoftware vatambi vane hutsinye hwenguva dzose mumaawa anopfuura makumi matanhatu ekutamba - ayo anogona kutambanudzwa nyore kusvika kaviri. Sezvakaita neMweya Wakasviba, zvakafanana zvinoshanda kuna Elden Ring: Haufanire kutya rufu, unofanirwa kupemberera.
ELDEN RING - Yekutanga Edition [PlayStation 5] * Parizvino hapana ongororo 62,99 EUR tenga
mhedziso Elden Ring inyanzvi uye pasina mubvunzo rimwe remabasa akanakisa munhoroondo yemutambo wevhidhiyo. Iwe unofanirwa kukwanisa kutsungirira nguva dzekuvhiringidzika, kubvuma kuoma kwakaoma pane dzimwe nguva paunenge uchiongorora nzvimbo huru. Uye iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kuve gamepad acrobat. Asi zvino: Iwe uchada Elden Ring.
Kare Jackbox Mitambo inodzoreredza mitambo yepati
Inotevera "Tales iChaizvo": Yekufungidzira kadhi mutambo mune yemutambo forge
Mwoyo yeIron IV: Kuwedzera kutsva kuri kuuya munaNovember
Playstation 5: imhando hombe iri kuuya sezita rekutanga?
WWE 2K22: zuva rekuburitsa uye nyeredzi yekuvhara iri pano
Vanamwari vanoda Dinosaurs: Nyowani bhodhi mutambo naKaspar Lapp uye Pandasaurus Mitambo